बालकोटमा बन्यो खतरनाक योजना, रात्रि भोजमा प्रचण्डलाई हटाउन देउवा र ओली सहमत !::Pathivara News
बालकोटमा बन्यो खतरनाक योजना, रात्रि भोजमा प्रचण्डलाई हटाउन देउवा र ओली सहमत !
माओवादीलाई पेलेरै जान ओलीको प्रस्ताव
१३,पुस,काठमाडौं । दलहरुवीच असमझदारी बढिरहेको बेला सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीवीच गोप्य डिनर मिटिङ भएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुवीच सम्बन्ध चिसिएको बेला एकाएक देउवा र ओलीवीच डिनर मिटिङ् भएपछि राजनीति पूनः तरंगित बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
सोमबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आह्वान गरेको ७ दलको बैठकपछि काँग्रेस सभापति देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न राती ८ बजेतीर भक्तपुरस्थित् ओली निवास बालकोटमा पुगेका थिए । स्रोतका सोमबार अबेर साँझसम्म चलेको भेटवार्तामा एमाले अध्यक्ष ओली निकै गम्भिर रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई सहजै रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्लानजस्तो नलागेपछि देउवाले ओलीको साथ खोजेको बताइन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने निश्कर्ष देउवालाई सुनाएका थिए ।
वैठकले ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई तत्काल विस्थापित गरेमात्रै आफुले गर्नसक्ने सहयोगका बारेमा सोच्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाई छ ।
ओलीले देउवालाई भने ‘प्रचण्डको सरकार ढाल्नको लागि एमालेले जेसुकै पनि सहयोग गर्छ तपाई अब प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, । पर्यो भने हामी सरकारमा पनि जान सक्छौं । अहिले एमालेको हाम्रो एकसूत्रीय माग भनेको प्रचण्डको विस्थापन नै हो ।’
ओलीले अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राखेर अघि बढ्नुपर्ने बारेमा पनि काँग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए । ओलीले देउवालाई प्रचण्डलाई पेलेरै जान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ओलीको कुरा सुनिसकेपछि देउवाले आफू प्रचण्डलाई हटाउनको लागि तयार भएको आश्वासन अध्यक्ष ओलीलाई दिए । तर उनले ओलीसँग संविधान कार्यान्वयन हुने आधार र चुनाव सम्पन्न गर्ने कुराको स्पष्ट आधार माग गरेका थिए । देउवाले संविधान संशोधनबारे ओलीसंग स्पष्ट धारणा मागेपनि ओलीले संशोधनमा कुनै सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ फर्काएका